RISC-V-yakavakirwa Allwinner Xuantie C906 Dheti pa $ 12.5 Bhodhi | Linux Vakapindwa muropa
XuanTie C906: RISC-V-yakavakirwa chip debuts pane bhodhi ye $ 12.5
Iyo isina T-Musoro, inotsigira yeChinese hofori Alibaba Boka, uye Allwinner, vaburitsa imwechete-musimboti processor inonzi XuanTie C906, zvichibva paRISC-V, ine MMU yakabatanidzwa, uye iyo ichashandiswa mubhodhi reSipeed SBC iro rinongobhadhara $ 12.5.
Kudzoka muna Chikunguru 2019, Alibaba Boka rakashamisika neRISC-V-yakavakirwa SoC dhizaini iyo yaive ine simba kwazvo kusvika nhasi. Yaive iyo XuanTie 910 ine 16 cores pa2.5Ghz. Zvino, nekubatana uku naAllwinner, yaburitsa mumwe muchero, iyo XuanTie C906 pa1Ghz uye inotsigira RV64GCV. Zvakwana kukwanisa kumhanya Debian GNU / Linux pasina matambudziko. Kunyangwe, semamwe magadzirirwo, haina 3D GPU.
Zvese zviri mukomputa module fomati yakavakwa naAllwinner uye izvo Yakapepetwa inoshandiswa pabheji yako. SBC iyo kana iwe uchifarira inosvika kumusika mukati memwedzi miviri kana mitatu. Sekureva kwevakabatana navo, hapana pasi pemamiriyoni makumi mashanu emayuniti anotumirwa. Ichave yakanangana nevatengi zvemagetsi, zveindasitiri kutonga, uye yeiyo smart imba.
Kuti uwane rumwe ruzivo, T-Musoro yakatumira zvimwe hunyanzvi hunhu chip:
22nm yekugadzira node
64KB yeL1 yemirairo uye data.
4.0-bit AXI 128 bhazi
1Ghz wachi kuwanda
2.4 / Mhz DMIPS (O2) uye 3.8 / Mhz mashandiro muCoreMark (o3). Kana ichienzaniswa ne7.1 / Mhz yeCoreMark yakawanikwa neXuanTie 910 uye iyo 5.1 / Mhz yeSiFive U74 IP (kubva kubhodhi reamai. HiFive Isingaenzaniswi), hazvina kushata zvachose.
Zvimwe SBC Magadzirirwo (zvichibva paruzivo rwushoma rwuripo panguva ino):
CNXSoft yakatumira kupihwa kweSBC uye iwe unogona kuona kuti inopa 64MB kusvika 256MB DDR muPoP module.
Panogona kuve nedzimwe shanduro dzine mari dzakasiyana.
Ini / O ine HDMI, RGB, DVP, uye MIPI zviteshi.
MicroSD kadhi slot
USB inomiririra uye OTC
GMAC inogoneswa kune GbE port.
Paizove nesarudzo yeWiFi / Bluetooth vhezheni.
Kubva paDebian GNU / Linux, chiChinese distro inonzi TinaOS.
Zvino, kuwedzera kune iyo SBC mabhodhi ARM-yakachipa yakachipa, iwe unogona zvakare kutarisira pane mamwe aya RISC-Vs. Uye ndine chokwadi chekuti zvakawanda zvichasvika munguva pfupi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » XuanTie C906: RISC-V-yakavakirwa chip debuts pane bhodhi ye $ 12.5
Isingachinjiki Enterprise Kernel R6U1 Inosvika neDriver Enhancements uye Zvimwe
Ivo vanofunga kuisa mutero pabasa kubva kumba